နေမကောင်းတဲ့ကြားထဲကနေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ဖို့ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေတဲ့ ဧရာရဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ ကိုပေါက် – Askstyle
နေမကောင်းတဲ့ကြားထဲကနေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ဖို့ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေတဲ့ ဧရာရဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ ကိုပေါက်
နုိင္ငံေက်ာ္ လူရႊင္ေတာ္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သလို၊ ဇာတ္ပို့ဇာတ္ရံသရုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္၊ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့ ဧရာကေတာ့ ဒီကေန့မွာ သူခ်စ္တဲ့ အနုပညာေလာကကို အျပီးတုိင္ နႈတ္ဆက္ထြက္ခြာသြားခဲ့ျပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာကေတာ့ ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္မွာ အသက္ (၆၁) နွစ္ရိွေနျပီျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ အနုပညာအလုပ္ေတြအေပၚ စြဲလန္းသြားရွာသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံေက်ာ္ဒါရိုက္တာ သရုပ္ေဆာင္ ကိုေပါက္က ေနမေကာင္းတဲ့ၾကားထဲကေန ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြရိုက္ဖို့ဆႏၵေတြျပင္းျပေနတဲ့ ဧရာရဲ့အေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာျပလာခဲ့တာကို ေတြ့ရပါတယ္။
““ေႂကြျပန္ၿပီေပါ့ေနာက္ၾကယ္ တစ္ပြင့္” ကိုဧရာ႐ိုက္ေစခ်င္လို႔ေပးထားတဲ့ ဇာတ္တစ္ပုဒ္ ကြၽန္ေတာ္႐ိုက္ေပးဖို႔က်န္ေနေသးတယ္ေလ။ ကိုေပါက္႐ိုက္မယ္ေလ ေခၚဦးေလ က်န္းမာေရးေကာင္းသြားၿပီဆိုလို႔ ေနာက္႐ိုက္မယ့္ ဇာတ္တစ္ခုမွာ အစ္ကို႔က္ို ထည့္ထားတယ္ေလ…. အခုေတာ့ ……….ဗ်ာ… အားလုံးကိုေပ်ာ္ေစခဲ့တဲ့ ကိုဧရာ ေကာင္ရာသုဂတိလားပါေစ” ဆိုျပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုေပါက္ကေတာ့ ဧရာရဲ့ ဇာတ္တစ္ပုဒ္ကို မရိုက္ကူးေပးလိုက္နုိင္တဲ့အျပင္ သူကိုယ္တိုင္ ဧရာအတြက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ကာရိုက္တာကိုလည္း မရိုက္ကူးေပးလုိက္နိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနုပညာရွင္ကိုခ်စ္တဲ့ ဧရာတစ္ေယာက္ ေနာက္ဘဝေတြမွာလည္း ျပည္သူခ်စ္အနုပညာရွင္ၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစလို့ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
Source: Aung Min Naing ‘s fb
နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို၊ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်၊ စာရေးဆရာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဧရာကတော့ ဒီကနေ့မှာ သူချစ်တဲ့ အနုပညာလောကကို အပြီးတိုင် နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာကတော့ ကွယ်လွန်သွားချိန်မှာ အသက် (၆၁) နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ အနုပညာအလုပ်တွေအပေါ် စွဲလန်းသွားရှာသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင် ကိုပေါက်က နေမကောင်းတဲ့ကြားထဲကနေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ဖို့ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေတဲ့ ဧရာရဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟပြောပြလာခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
““ကြွေပြန်ပြီပေါ့နောက်ကြယ် တစ်ပွင့်” ကိုဧရာရိုက်စေချင်လို့ပေးထားတဲ့ ဇာတ်တစ်ပုဒ် ကျွန်တော်ရိုက်ပေးဖို့ကျန်နေသေးတယ်လေ။ ကိုပေါက်ရိုက်မယ်လေ ခေါ်ဦးလေ ကျန်းမာရေးကောင်းသွားပြီဆိုလို့ နောက်ရိုက်မယ့် ဇာတ်တစ်ခုမှာ အစ်ကို့ကို ထည့်ထားတယ်လေ…. အခုတော့ ……….ဗျာ… အားလုံးကိုပျော်စေခဲ့တဲ့ ကိုဧရာ ကောင်ရာသုဂတိလားပါစေ” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုပေါက်ကတော့ ဧရာရဲ့ ဇာတ်တစ်ပုဒ်ကို မရိုက်ကူးပေးလိုက်နိုင်တဲ့အပြင် သူကိုယ်တိုင် ဧရာအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကာရိုက်တာကိုလည်း မရိုက်ကူးပေးလိုက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်ကိုချစ်တဲ့ ဧရာတစ်ယောက် နောက်ဘဝတွေမှာလည်း ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။